Mitohy ny fitrandrahana antsokosoko harem-pirenena
Isan’ny teboka mahasarotiny ny malagasy maro ny tsy fisian’ny fepetra sy finiavana avy amin’ny mpitondra fanjakana nifandimby amin’ny fiarovana ny harem-pirenena eto. Tsy mahagaga izany satria mahita tombony amin’izany ny manam-pahefana sasany, ary arakaraky ny anidiany ny seha-pitrandrahana no mampidanadana ny vavahadin’ny fitrandrahana antsokosoko.
Ara-tarehi-marika dia zara raha 26 sisa ny isan’ireo fahazoan-dalana hitrandrahana harena ankibon’ny tany na « permis minier » voalaza fa ara-dalàna ary niasa tsy tapaka na mifanandrify amin’ny vanim-potoana ankehitriny, tamin’ireo 5.000 nivoaka sy mipariaka manerana ny Nosy.
Ny filohan’ny federasiona malagasin’ireo mpitrandraka harena ankibon’ny tany (Fomm) no nanamarika an’izany.
Raha itodihana ny raharaha dia efa hatramin’ny vanim-potoana tetezamita no voambara fa miato ny famoahana fahazoan-dalàna mitrandraka harena ankibon’ny tany. Tsy nitsahatra anefa ny fitrandrahana fa nitohy hatrany, ary na nisy aza tamin’ny taon-dasa ny famerana ny fahafahana manondrana harena ankibon’ny tany dia tena arakaraky ny fandrarana no mampiroborobo antsokosoko ny fanondranana.
Rehefa tena hadihadiana ny toe-draharaha dia na mitsikombakomba amin’ny manam-pahefana ara-panjakana ny mpanondrana antsokosoko, izany hoe anjakan’ny kolikoly, na olona akaiky ny manam-pahefana ambony no mpanondrana antsokosoko dia ifampizarana ny tombony, na ilay manam-pahefana mihitsy no tompon’ny fanondranana antsokosoko fa mpiasany ihany ny mpanondrana.
Ny ady hevitra izany izao dia tsy any amin’ny fisian’ny fahazoan-dalana hitrandraka na tsia fa na misy io na tsia dia miroborobo ny fitrandrahana, ary na misy io na tsia, na mitohy na miantona ny fanondranana, dia tsy misy mijanona eto ny harem-pirenena voatrandraka (antsokosoko) fa miondrana hatrany. Noho izany, ahoana ny hifampifehezana amin’izy io ? Ahoana no hivadihan’ny vola vidin’izy ireny ho amin’ny tombontsoam-bahoaka ?
Tsy maintsy miainga amin’ny mpitondra mitana ny fahefam-panjakana hatrany ny finiavana handamina sy hanadio io tontolo io mba hisitrahan’ny vahoaka ny tombontsoa avy amin’ireny harem-pirenena ireny.
Efa nisy ny vahaolana navoaka teto hoe « atsangano ny toeram-pividianana harena » na « comptoir de l’or et de pierre précieuse » ka ny fanjakana no mitantana azy io. Akarina avo dimy heny amin’ny vidiny ifampivarotan’ny mpitrandraka amin’izay mpividy amin’izao fotoana ny sandany. Vola malagasy no ividianan’io toeram-pividianana (comptoir) io ny harena fa tsy maintsy amidy amin’ny vola vahiny any ivelany izany. Hitombo ny vola vahiny hiditra amin’ny kitapom-panjakana ary hiakatra hatramin’ny sandan’ny vola malagasy ariary amin’izay.
Hanana finiavana hiroso amin’izany ve ny mpitondra ? Ny mahavariana dia tsy mba sarotiny amin’io fitrandrahana antsokosoko sy fanondranana antsokosoko ny harem-pirenena eto io sy ny haraena andranomasina avy eto ny misora-tena ho « mpamatsy vola iraisampirenena ». Tsy inona no anton’izany fa ahitan-dry zareo tombony ilay gaboraraka sy tsikombakomba avo lenta, ary tsy ahitan’ireny rafitra mpamatsy vola iraisampirenena ireny ny fahaiza-manaony sy ny fahombiazany raha miha-afaka eo ambany ziogan’ny teti-pampahantrana ny malagasy, ka ampirisihan’izy ireny aza ny fitrandrahana antsokosoko sy ny fanondranana antsokosoko.